Kuona Hottest chitsuwa akapinda nepachinko yokumusoro
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Kuona Hottest chitsuwa akapinda nepachinko yokumusoro
Muna nepachinko parlors, nepachinko muchina chibereko. Nokurongwa nepachinko yaiitirwa pakati yokutevedzera, tichitarisa vemamwe maindasitiri, achava akafanana uri kuratidza nhumbi. Muna nepachinko yokumusoro, Shima uchida kutora muenzaniso chitsuwa uye akatsiga kwakakomba mubereko ari anoratidza mumire mukushanda kuti unoda kutaura, uyewo pane zvinhu zvakawanda kushandura placement uye kuzoita chacho zvachose.
zvichienderana nokuti uri uchingoti chero muenzaniso upi chitsuwa, tinoziva chinangwa maziso muenzaniso iri nepachinko yokumusoro. Model, inova nzvimbo pedyo
zvikuru pamberi chiteshi, uyewo billboard womuenzaniso uye Xintai zvitoro zhinji, kazhinji muenzaniso kuti unoda kuwana yakagadzikana oparesheni. Nokuti Ndiyewo akatsiga chipikiri kuchinja uye Horukon yakatarwa, sei zvakanaka, sezvo zvakazara kuti chitsuwa kana paine achimhanya, ndinofunga kuti ndicho chinokosha Atsuishima.
muchitoro, vakawanda Atsuishima haasi chiratidzo yokutevedzera muna Xintai, quasi-Xintai uye, chitsuwa kuti iri ndiro muenzaniso kuti zvine mukurumbira.
it chiri inowanzoshandiswa chiitiko, asi kunewo mukana kuti kashoma kuti Gase chiitiko zvichienzaniswa muenzaniso zviduku. Achitaura kana akadaro muenzaniso zvakanaka akagadzirirwa chero chitsuwa, kana shure nomukova chitoro, riri pedyo nepakati muchitoro. In Kana apo
chitsuwa nokutarira kupisa miti, ndapota edza kuteerera. Back pesuwo, zvichiita kuti zvive nyore kushanda kunyange kuwana dzakatsarukana nzvimbo dzakabatana meso ako. Munguva zvitoro pedyo nepakati, kusvikira mukati menyika chitoro vatengi, tiri papi kuuya kuzochera.
Muchidimbu, muenzaniso kuti yave kuiswa mune nzvimbo iyi, ndiko kuti kazhinji muenzaniso kuva anoratidza vakamira muchitoro. Kuti izvi zvidaro, paavhareji, zvichida kuitwa muna chiitiko muenzaniso, kakawanda chipikiri kugadziridzwa zvakare kuchengeta hwandaiva chipikiri.
Zvino chiwi yaiva kuna, saka kunyange nani mashandiro pamwe zvakasikwa, kuva nokukurumidza convergence pamusoro guru raparadza mukana, achava chinhu kuti uderedze kuguma kudhonza nenjodzi. Tinowanzova kuvanzwa zvinoodza kusaina womuenzaniso uye Xintai, asi imwe dhigirii rakatsiga Ikoko nokuti, chokwadi, ndinofunga kuti ndicho chitsuwa chinangwa nyore pakati nepachinko yokumusoro.
ndiyo nguva ino ndiko kutanga, achava mukuru urongwa chitsuwa, chitsuwa mienzaniso urongwa, kubudikidza kana kuenda worudzii basa, ndizvo dzinosiyana zvikuru neimwe nepachinko yokumusoro. Pachitsuwa zvikamu zvinoonekwa kubva pamukova, panewo nepachinko yokumusoro kuuya isa zvose chinangwa ziso womuenzaniso. By
mari zvazvingava, panewo nepachinko yokumusoro, etc. kuti hakuiti kuti chitsuwa yakadaro. Kana munhu kudzikinurwa exchange zvakakwirira nepachinko yokumusoro, nekuti haana kuzovazve yakatokura mari hakufaniri, zvinobva zvava zvinonetsa zvinozipa pane chiratidzo yokutevedzera.
kunyange yakakwirira kutendeutsa reshiyo, ari kugadzirwa rokutengesa zvakanaka nepachinko parlors, pangava chitsuwa kwakadaro. Nepachinko yokumusoro iri kutendeuka reshiyo wenyu, panyaya asingasviki 3 Yen, vanofanira ipapo nguva dzose masa vari akaronga muenzaniso kuti chokutanga mumvuri kunangidzirwa.
ndakaenda chitoro, Chokutanga, edza kuzosimbisa chitsuwa pedyo nepakati pachitsuwa nokusimbisa uye weshure pedyo nezvitoro ose billboard yokutevedzera. Zvinoshamisawo kuvavarira Pangave chitsuwa kuti akaronga muenzaniso. Unofanira.
ndakaenda chitoro, Chokutanga, edza kuzosimbisa chitsuwa pedyo nepakati pachitsuwa nokusimbisa uye weshure pedyo nezvitoro ose billboard yokutevedzera. Zvinoshamisawo kuvavarira Pangave chitsuwa kuti akaronga muenzaniso.